chorionic မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲကကလေးမှအာဟာရနှင့်အောက်စီဂျင်များထောက်ပံ့ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သော, အ Ovum ၏အပြင်ဘက်၌ shell ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ပထမဦးဆုံးသုံးလပတ် chorionic ပြီးနောက်အားလုံးအထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်ကြာသောအချင်း, ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ယင်းအချင်းများနှင့် CVS ၏ပုံမှန်ပြည်နယ် - သန္ဓေသား၏အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအခွအေနေ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက် chorionic ငျးကှာကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ၏တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပြီးချက်ချင်းဆေးကုသလိုအပ်သည်။
ကှာခွငျး chorionic ဖြစ်ပေါ်စေသည်
အောက်ပါအချက်များ CVS ကွာနှိုးဆော်ခြင်းနိုင်သည်
အမျိုးသမီး၏အသက်အရွယ် - 20 မတိုင်မီသို့မဟုတ် 35 နှစ်အကြာတွင်;
မကောင်းတဲ့အလေ့အထ - ဆေးလိပ်မသောက်, အရက်, မူးယစ်ဆေးဝါး,
Detachment chorionic နှင့်ချင်း, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းနှင့်ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌, ငျးကှာ chorionic မှုမရှိခြင်းကို၏အရွယ်အစား - များသောအားဖြင့်အလယ်၌ဖြစ်စေအစွန်းပေါ်မှာ။ ဗဟိုငျးကှာသားအိမ်နှင့်ချင်း (chorionic) တို့အကြားအသွေးစုဆောင်းခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
ကု သ. မရကြောင်းအဆိုပါအန္တရာယ်အရှိဆုံးစုစုပေါင်း placental chorionic ။ ထိုအ placental ရုတ်တရက်နှင့်အတူကိုယ်ဝန်နောက်ပိုင်းအဆင့်သည်မှန်လျှင်, ဆရာဝန်များကိုပထမဆုံးသုံးလပတ်အတွက်သန္ဓေသားကိုကယ်တင်ရန်ကြိုးစားသည်ရလဒ်အစဉ်အမြဲအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် - တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ။ ဒီရောဂါဗေဒပြည်တွင်းရေးသွေးထွက်စေနိုင်သောကြောင့်အပြည့်အငျးကှာနှင့်အတူကိုယ်ဝန်မဟုတ်ဘဲသာအဓိပ္ပာယ်မဲ့ဒါပေမယ့်လည်းအမိ၏အသက်အဘို့အအန္တရာယ် chorionic ။
လွှာငျးကှာ chorionic ၏ကုသမှု
မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက် chorionic ငျးကှာ, သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများအဖြစ်မတည်ရှိပါဘူး။ များသောအားဖြင့်တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စီမံခန့်ခွဲ - ဒါဟာအစောပိုင်းအဆင့်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း delamination သေချာပေါက်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျအတွက်အဆုံးသတ်ရန်မလိုပါကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။
သားအိမ်၏အကြောင်းရင်း delamination chorionic သေံထို့နောက်မူးယစ်ဆေးဝါး, tocolysis တစ်သင်တန်းတာဝန်ပေးအပ်လျှင်။ အပေါများအစက်အပြောက်ဆရာဝန်နှင့်အတူတစ်ဦး hemostatic အေးဂျင့်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း, ချို့ယွင်းသောတစ်မရှိခြင်းနှင့်အတူ - ပုံမှန်အား Utrozhestan ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုမိန်းမသည်တင်းကြပ်စွာဖြစ်သင့် , အိပ်ရာကြွင်းသောအရာနှင့်အတူလိုက်လျောမဆိုစိတ်အားသန်သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ဘဝအပေါ်တစ်ဦးအနေဖြင့်တက်သည်ပေးပါ။
CVS delamination အောက်ပါမြေပြင်ပေါ်တွင်ရှိနိုင်ပါသည် detect:
ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ cramping နာကျင်မှု;
သန္ဓေသားလှုပ်ရှားမှုများ - ကိုယ်ဝန် 38 အပတ်က
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် Oligohydramnios - 32 ပတ်ကြာ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သွေးအားနည်း 1 ဒီဂရီ
ကျွန်မကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း Nospanum နိုင်သလား?
သန္ဓေသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတ - ကိုယ်ဝန်6ပတ်က
ဘယ်အချိန်မှာစပျစ်သီးအစားထိုး - နွေဦးသို့မဟုတ်ဆောင်းဦးရာသီအတွက်?
Yorkshire Terriers အတွက် Estrus
ငါ Chlorhexidine နှင့်အတူ gargle နိုင်သလား?
စိမ်းဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ဆီးထဲမှာသွေးနီဆဲလ် - ပုံမှန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခံရ?
တစ်ဦး milkshake အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
မိန်းကလေးများ 2013 ခုနှစ်ကျစ်လျစ်သေးသွယ်အရွယ်အစား
ပြည်ထဲရေး finish ကို loggia - မှသတိထားရမှာတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကူးများ
Sean Bean ကိုပဉ္စမအကြိမ်လက်ထပ်ရတဲ့
Canapés - ရိုးရှင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများ